Haalotaa fi Jireenya ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• √ Haala hadhaa'aa malee jireenyi hadhaa'aan hin jiru. √ Haala rakkisaa malee jireenyi rakkisaan hin jiru. √ Haala ulfaataa malee jireenyi ulfaataan hin jiru. Bara keenya kana keessatti jechoonni: # " jireenyi ni ulfaata" # "jireenyi rakkistuudha" # "jireenyi hadhaa'aadha" Jedhan beekkamtiirra darbanii aadeeffatamaniiru. Sababni kana hundaa ammoo dhugumaan haalota jireenya keessa jiranii fi jireenya ofiidhuma isheetii gargar baasanii ilaaluu dhabuu kan bu'uura godhate dha. Mee yaadaan of-ilaalee manakee keessa dhaabatu fuuldura dhaabadhu. Of-ilaalee (daawwitii-diriiraa) sana keessaan suuraa kee argita. Hubadhu, of-ilaalee sana keessatti suuraakee waan argiteef, anumatu of-ilaalee kana keessa galee laata??? jettee gaaffii ofiin of gowwomsuu of hin gaafattu. Sababnisaa, akka dhuguma qaamaan of-ilaalee sana keessa hin jirre waan beektuuf jechuu dha. Egaa daawwitiin-diriiraa (plane-mirror) amala inni ittiin beekkamu keessaa inni tokko, fakkaattii garagaltoo(fuggisoo) qaama isa dura dhaabatuu agarsiisuu isaati. Egaa haalonni nuyi jireenya keessatti arginuu akka of-ilaalee(daawwitii-diriiraa) yoo ta'an, jireenyi ammoo akka qaama daawwitii-diriiraa sana dura jiruuti. Akkuma daawwitii-diriiraa sana keessa qaama sirrii keenya barbaaduun of gowwomsuu ta'e akkasuma, haalota jireenya keessatti argaman keessa hiikkaa jireenyaa isa sirrii barbaaduunis, gowwummaa keessaayyuu mataa gowwummaati. Kana malees, haalonni nuyi jireenya keessatti arginuu amaloota fuggisoo(garagaltoo) jireenyaa nutti argisiisu. Kana jechuunis, gaafa haalli jireenya keessaa hadhaa'ummaa calaqqisiisu, amalli jireenyaa ammoo faallaa haala sanaan calaqqisiifama. Gaafa haalonni jireenya keessaa gadda argisiisan, jireenyi ammoo faallaa haala sanaan agarsiisa. Kanaafuu, haalota jireenya keessatti argamanii fi jireenya gidduu garaagarummaa jiru haalaan xiinxaluun barbaachisaadha. – Haalotaa fi Jireenya ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• √ Haala hadhaa'aa malee jireenyi hadhaa'aan hin jiru. √ Haala rakkisaa malee jireenyi rakkisaan hin jiru. √ Haala ulfaataa malee jireenyi ulfaataan hin jiru. Bara keenya kana keessatti jechoonni: # " jireenyi ni ulfaata" # "jireenyi rakkistuudha" # "jireenyi hadhaa'aadha" Jedhan beekkamtiirra darbanii aadeeffatamaniiru. Sababni kana hundaa ammoo dhugumaan haalota jireenya keessa jiranii fi jireenya ofiidhuma isheetii gargar baasanii ilaaluu dhabuu kan bu'uura godhate dha. Mee yaadaan of-ilaalee manakee keessa dhaabatu fuuldura dhaabadhu. Of-ilaalee (daawwitii-diriiraa) sana keessaan suuraa kee argita. Hubadhu, of-ilaalee sana keessatti suuraakee waan argiteef, anumatu of-ilaalee kana keessa galee laata??? jettee gaaffii ofiin of gowwomsuu of hin gaafattu. Sababnisaa, akka dhuguma qaamaan of-ilaalee sana keessa hin jirre waan beektuuf jechuu dha. Egaa daawwitiin-diriiraa (plane-mirror) amala inni ittiin beekkamu keessaa inni tokko, fakkaattii garagaltoo(fuggisoo) qaama isa dura dhaabatuu agarsiisuu isaati. Egaa haalonni nuyi jireenya keessatti arginuu akka of-ilaalee(daawwitii-diriiraa) yoo ta'an, jireenyi ammoo akka qaama daawwitii-diriiraa sana dura jiruuti. Akkuma daawwitii-diriiraa sana keessa qaama sirrii keenya barbaaduun of gowwomsuu ta'e akkasuma, haalota jireenya keessatti argaman keessa hiikkaa jireenyaa isa sirrii barbaaduunis, gowwummaa keessaayyuu mataa gowwummaati. Kana malees, haalonni nuyi jireenya keessatti arginuu amaloota fuggisoo(garagaltoo) jireenyaa nutti argisiisu. Kana jechuunis, gaafa haalli jireenya keessaa hadhaa'ummaa calaqqisiisu, amalli jireenyaa ammoo faallaa haala sanaan calaqqisiifama. Gaafa haalonni jireenya keessaa gadda argisiisan, jireenyi ammoo faallaa haala sanaan agarsiisa. Kanaafuu, haalota jireenya keessatti argamanii fi jireenya gidduu garaagarummaa jiru haalaan xiinxaluun barbaachisaadha.
Haalotaa fi Jireenya ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• √ Haala hadhaa'aa malee jireenyi hadhaa'aan hin jiru. √ Haala rakkisaa malee jireenyi rakkisaan hin jiru. √ Haala ulfaataa malee jireenyi ulfaataan hin jiru. Bara keenya kana keessatti jechoonni: # " jireenyi ni ulfaata" # "jireenyi rakkistuudha" # "jireenyi hadhaa'aadha" Jedhan beekkamtiirra darbanii aadeeffatamaniiru. Sababni kana hundaa ammoo dhugumaan haalota jireenya keessa jiranii fi jireenya ofiidhuma isheetii gargar baasanii ilaaluu dhabuu kan bu'uura godhate dha. Mee yaadaan of-ilaalee manakee keessa dhaabatu fuuldura dhaabadhu. Of-ilaalee (daawwitii-diriiraa) sana keessaan suuraa kee argita. Hubadhu, of-ilaalee sana keessatti suuraakee waan argiteef, anumatu of-ilaalee kana keessa galee laata??? jettee gaaffii ofiin of gowwomsuu of hin gaafattu. Sababnisaa, akka dhuguma qaamaan of-ilaalee sana keessa hin jirre waan beektuuf jechuu dha. Egaa daawwitiin-diriiraa (plane-mirror) amala inni ittiin beekkamu keessaa inni tokko, fakkaattii garagaltoo(fuggisoo) qaama isa dura dhaabatuu agarsiisuu isaati. Egaa haalonni nuyi jireenya keessatti arginuu akka of-ilaalee(daawwitii-diriiraa) yoo ta'an, jireenyi ammoo akka qaama daawwitii-diriiraa sana dura jiruuti. Akkuma daawwitii-diriiraa sana keessa qaama sirrii keenya barbaaduun of gowwomsuu ta'e akkasuma, haalota jireenya keessatti argaman keessa hiikkaa jireenyaa isa sirrii barbaaduunis, gowwummaa keessaayyuu mataa gowwummaati. Kana malees, haalonni nuyi jireenya keessatti arginuu amaloota fuggisoo(garagaltoo) jireenyaa nutti argisiisu. Kana jechuunis, gaafa haalli jireenya keessaa hadhaa'ummaa calaqqisiisu, amalli jireenyaa ammoo faallaa haala sanaan calaqqisiifama. Gaafa haalonni jireenya keessaa gadda argisiisan, jireenyi ammoo faallaa haala sanaan agarsiisa. Kanaafuu, haalota jireenya keessatti argamanii fi jireenya gidduu garaagarummaa jiru haalaan xiinxaluun barbaachisaadha.
Haalotaa fi Jireenya ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• √ Haala hadhaa'aa malee jireenyi hadhaa'aan hin jiru. √ Haala rakkisaa malee jireenyi rakkisaan hin jiru. √ Haala ulfaataa malee jireenyi ulfaataan hin jiru. Bara keenya kana keessatti jechoonni: # " jireenyi ni ulfaata" # "jireenyi rakkistuudha" # "jireenyi hadhaa'aadha" Jedhan beekkamtiirra darbanii aadeeffatamaniiru. Sababni kana hundaa ammoo dhugumaan haalota jireenya keessa jiranii fi jireenya ofiidhuma isheetii gargar baasanii ilaaluu dhabuu kan bu'uura godhate dha. Mee yaadaan of-ilaalee manakee keessa dhaabatu fuuldura dhaabadhu. Of-ilaalee (daawwitii-diriiraa) sana keessaan suuraa kee argita. Hubadhu, of-ilaalee sana keessatti suuraakee waan argiteef, anumatu of-ilaalee kana keessa galee laata??? jettee gaaffii ofiin of gowwomsuu of hin gaafattu. Sababnisaa, akka dhuguma qaamaan of-ilaalee sana keessa hin jirre waan beektuuf jechuu dha. Egaa daawwitiin-diriiraa (plane-mirror) amala inni ittiin beekkamu keessaa inni tokko, fakkaattii garagaltoo(fuggisoo) qaama isa dura dhaabatuu agarsiisuu isaati. Egaa haalonni nuyi jireenya keessatti arginuu akka of-ilaalee(daawwitii-diriiraa) yoo ta'an, jireenyi ammoo akka qaama daawwitii-diriiraa sana dura jiruuti. Akkuma daawwitii-diriiraa sana keessa qaama sirrii keenya barbaaduun of gowwomsuu ta'e akkasuma, haalota jireenya keessatti argaman keessa hiikkaa jireenyaa isa sirrii barbaaduunis, gowwummaa keessaayyuu mataa gowwummaati. Kana malees, haalonni nuyi jireenya keessatti arginuu amaloota fuggisoo(garagaltoo) jireenyaa nutti argisiisu. Kana jechuunis, gaafa haalli jireenya keessaa hadhaa'ummaa calaqqisiisu, amalli jireenyaa ammoo faallaa haala sanaan calaqqisiifama. Gaafa haalonni jireenya keessaa gadda argisiisan, jireenyi ammoo faallaa haala sanaan agarsiisa. Kanaafuu, haalota jireenya keessatti argamanii fi jireenya gidduu garaagarummaa jiru haalaan xiinxaluun barbaachisaadha., Start a Blog at WordPress.com.